Rakkoo mana jireenyaa hiikuuf hojjetamuu qaba jedhame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Rakkoo mana jireenyaa hiikuuf hojjetamuu qaba jedhame
On Feb 14, 2020 31
Finfinnee, Gurraandhala 6, 2012 (FBC) – Rakkoo mana jireenyaa hiikuuf hojjetamuu qaba jedhame.
Biiroon Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa waltajjii marii qooda fudhattoota magaalota Oromiyaa waliin magaalaa Adaamaatti mari’ateera.
Marii kanaanis rakkoo mana jireenyaa hiikuuf tumsaan hojjechuun ni barbaachisa jedhaniiru.
Marii qooda fudhattoota magaalota Oromiyaa irraa walitti dhufan waliin taasifameen sagantaawwan bulchiinsi mana mootumma, waldaa mana jireenyaa, manneen waliinii fi misooma riil isteetii irratti hojii hojjetamaa tureen bu’aan akka salphaatti hin ilaalamne raawwatamaa turuu illee, hanqina bal’aa fi irraa baratamuu qabu ta’u, hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa obbo Jamaal Kadir ibsaniru.
Dabalataanis rakkoo mana jireenyaa magaalota Oromiyaa keessatti mul’atu qorannoon deeggaramuun, seerotaan sirreeffamuu qaban sirreessun jalqabame kutannoon hojiitti hiikuf hojjetamuu akka qabu himaniiru.
MM FDRI Dooktar Abiy jiraattoota godina Alaabaa fi Kambaataa Xambaaroo galateeffatan
Hojiileen walitti dhufeenya ummataa cimsan sadarkaa biyyaaleessatti ni hojjetamu –…
Obbo Gadduun gita isaanii Xaaliyaanii waliin mari’atan
Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad bakka bu’oota jiraattoota godina Alaabaa…
Googl fayyadamtoonni Huwaawee haaraan appilikeeshinoota koo…
Waajjirri Muummee Ministiraa muudama laate
Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimadii fi preezdaantiin…
Ityoophiyaan marii Hidha Haaromsaarratti Ameerikaatti…
MM FDRI Dooktar Abiy jiraattoota godina Alaabaa fi Kambaataa…
Hojiileen walitti dhufeenya ummataa cimsan sadarkaa…
Oduu biyya keessaa850